Khudbadii Jimcaha Masjika Abubakar As-Saddique oo looga hadlay dilka Sh C/qaadir Nuur (Daawo)
Minneasota:- Khudbadii Jimcaha ee Masjidka Abubakar As-Saddique ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa looga hadlay dilkii foosha xumaa ee loo geystay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax Raximahulaah waxaana khudbada jeediyey Sheekh C/raxmaan Sheekh Cumar waxaana uu sheekhu aad ugu dheeraaday dilka qof muslinka ah khatarta uu leeyhaya.
Hoos Ka Daawo Khudbadii Jimacaha ee Sheekh C/raxmaan Sheekh Cumar uu ka jeediyey Masjidka Abubakar As-Saddique ee magaalada Minneapolis.
Masjidka Abubakar As-Saddique
Qeeyr Alaha siiyo Shiiq Cabdirahmaan wacdiga iyo waanada. Laakiin, ma uusan u sheegin umada Somaliyeed ee dhibaateeysan si “specific” ah sida la’iskaga dhicinayo argagixisada khawaarijta alshabaab ee culumadii dhameeysay, waxgaradkii iyo dadkii caadiga ahaana ka dhameeysay Somalia. Ilaa taas la helana, joojin maayaan cadowga Islaamka falkooda waxuushnimada ah. Hadal waxba tari maayo. Umada waxeey u baahantahay laba wax in eey culumada noo kala cadeeyaan.
1. In eey dhahaan argagixisada alshaabaa waa saxan yihiin ee hala raaco; amaba,
2. argagixisada alshabaab waa qaldan yihiin, waana cadowga umada Somaliyeed iyo Islaamka, ee halala dagaalamo si xamlo ah, oo umada dhan kawada qeeyb qaadato. Labadaas sheey wax Sadaxeeyo ma jiri karaan. Waa hadii xal la rabo.